Thenga abathengi encane kuyinto ebanzi ezahlukene imikhiqizo izingane nabazali bazo ukukhathazeka. Sivame ubuyise izinqolobane zethu novelties kanye ukulandela imfashini. Ngokwesibonelo, izingane uzobe ajabulela ethandwa manje Transformers Cybertron amathoyizi. Okokuqala, basuke ibekwe kahle ezandleni zezingane. Inzuzo yale transformers ngokungabi bikho izingxenye ezincane kanye izakhi: abazange elahlekile umdlalo ngesikhathi, kungukuthi vsunesh ku ikhala, umlomo, kahle, Corny bona kungabonwa etafuleni - kuyoba nzima ukulahlekelwa. T ransformery Cybertron amathoyizi ukuthuthukisa umcabango kanye ukucabanga okunengqondo. Yini ukufihla, abazali lezi amathoyizi nazo kwezinhloso zenzuzo. Amathoyizi uqine ngokwanele ukudlala izingane zabo bobudala obungefani, futhi wathi asebenza izandla zabo amandla ezahlukene.
Futhi sifuna ukwethula kuya ukunakwa wakho isilwane esihle, okuyinto amaphupho okuthulile ekhaya uyintombazane noma ungumfana - i cat interactive. Lokhu isilwane lithambe, nilalela, ke meows, ihamba izindlebe zakhe ngisho nut. Ihlukile amakati evamile ezingemnandi yasendlini: behlanza nezindlu zangasese, ukukha noboya, lokhu cat akuyona sangemuva peels kanye meows emithonjaneni yonke ngazo zonke izindlela. Futhi nteraktivnaya ikati ukulala, uma ungenawo adlale ngalo, futhi iza ekuphileni yikuphi ukuxhumana naye. Toy ungaba njengawo futhi kufanele nekama njengoba ikati eziphilayo. Lokhu ithoyizi isilwane uthando nokunakekela nesisa. ukuthenga izinto ezifana nalezi sengathi abazali abangafuni ukuletha ekhaya isilwane sangempela, ukuze singathwesi uziphe ekhathaza. Ikakhulukazi ngoba lokhu cat kulula ukuthatha nawe ku uhambo. Yena ngeke abe nandaba.
Kubalandeli of imidlalo sikanye abangane noma umndeni esitolo sethu ukuthenga imidlalo ebhodini. Funny kusihlwa romp uzonikezwa ku ukuthengwa nokudayiswa zezindiza, ezitaladini ukuthenga, e ukuhlaselwa nokuseshwa omakhelwane babo futhi ukunqoba impahla yabo. Kodwa umdlalo akuyona ngaphandle ukulahlekelwa kanye ukunqotshwa. Yiba uzilungiselele ukuthi othile beat ekuzimiseleni alinganayo, ngoba uma uthenga imidlalo esikebheni, inemizwa ehlukahlukene yokuxhumana yomuntu zizonikezwa kuwe. An plus ezengeziwe imidlalo ibhodi - ukuqaphela "nozakwethu" kusukela ezinhlangothini ezahlukene. Ubani owaziyo ukuthi ubani iyoba ugogo nabanomusa, eyokuqala yenziwa kwezigidi ezingu yakhe.
Wezingane amathoyizi Transformers eqondakalayo kanye ezithakazelisayo i eziyibonayo ingane ugingqe. Amathoyizi siguqulwe ngaphandle ukwehlukana izingxenye kanye izakhi, ngakho asikho izingxenye ngeke ilahleke. Ukuguqulwa yenzeka ezihlukahlukene amarobhothi nezimoto, izindiza, izilwane, njll Ngokuvamile, i-creative ukuqhuma zobuchopho futhi kubonakala kamhlophe ukuthuthukiswa enikeziwe. D etskie Transformers amathoyizi bangaba abangane wayemthanda kakhulu ingane yakho.
amathoyizi interactive alulaze izinsuku grey umntanakho. Futhi abadala kukhona into ukubona, isibonelo, Izilwane interactive behave fana izidalwa eziphilayo ihlaba umkhosi umsindo vocal, imilenze nyakazisa, ephethe umsila, ubuthongo, basabela ukudla, ehambisana nabo isethi, usabele ngayo uma icindezelwa. Ngokuphambene nalokhu, abazi ucele ethoyilethi futhi abazange ubuhlungu.
amathoyizi Interactive like umdlalo bukhoma, like i-encyclopedia, njengenhlangano interlocutor bakwazi ukufundisa into ingane entsha, ezihilela ingane ngesikhathi sokudlala ngokutjhaphuluka singathatha bukhoma. Bayakwazi ukuphendula imibuzo yakhe, okuphindaphindiwe ngokungenamkhawulo abaningi izikhathi imisindo izincwadi, baxoxe ngezinkinga, uhlabelele izihlabelelo. Nge ithoyizi ezifana scary ukushiya ingane, ufundisa kuye okuhle.
Amathoyizi izingane - kuyingxenye ebalulekile ekuphileni futhi izindleko lento. Kodwa yini esizimisele ukukhokha? Ukuze ukukhula komntwana, imfundo yakhe, ngoba walalela, ngoba nokuxhumana nabangani nomndeni. Kepha kwelifa loonyana ithoyizi imfashini, okuzoba emcimbini ukubukisa kubangani kanye nezintombi.
Nezimfumbe yezengqondo mayelana zikagesi
Lapho ephulukisa inkaba ngayo lapho usana, ikakhulukazi kucutshungulwa kanye nezincomo